Horudhac: Arsenal vs Sheffield United… (The Gunners oo doonaysa inay ka aar-gudato The Blades) – Gool FM
(London) 18 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates ku soo dhoweyn doonta maqribnimada maanta oo Sabti ah naadiga Sheffield United kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Kooxda The Blades lagu naanayso ee Sheffield United ayaa haatan afar dhibcood ka sarreysa dhanka horyaalka Premier League kooxda uu hoggaamiyo macallin Mikel Arteta ee Arsenal.
Gunners ayaa doonaysa inay ka aar-gudato kooxda Sheffield taasoo kulankii lugta hore ee horyaalka uga soo adkaatay 1-0 kulankii ka dhacay garoonka Bramall Lane bishii October.
Kabtanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa kulanka maanta waxaa u bilaabanaya ganaax saddex kulan ah, markii uu qaatay kaarka cas oo toos ah.
Sead Kolasinac iyo Lucas Torreira ayaa awoodi kari waayey inay si sax ah u tababartaan, maxaa yeelay waxa ay sheeganayana dhaawacyo, xaaladda labadaan xiddig ayaana la qiimeyn doonaa ka hor kulankan.
Macallinka kooxda Sheffield United ee Chris Wilder ayaa la warinayaa inaysan jirin wax wal-wal dhaawacyo ah oo haysta kooxdiisa ka hor kulankan.
Goolhayeyaasha keydka ee Michael Verrips iyo Simon Moore ayaa diyaar ah kulankan kaddib dhaawacyo ay la maqnaayeen.
>- Kani waa kulankii ugu horreeyey horyaalka Premier League ee garoonka Emirates ku dhexmara kooxaha Arsenal iyo Sheffield United tan iyo bishii September sanadkii 2006, markaasna waxaa 3-0 ku adkaatay Gunners.
>- Horyaalka heerka koowaad, Kooxda Sheffield United ayaan wax guul ah gaarin sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay oo iyagoo marti ah ay wajaheen Arsenal, waxaana ay ka soo heleen 1 Barbaro & 8 Guuldarro tan iyo markii ay 1-0 uga soo badiyeen bishii Agoosto sanadkii 1971-kii, goolkaasoo ay ka heleen Stewart Scullion.
>- Kooxda Sheffield United ayaa eegeysa inay markeedii ugu horreysay horyaalka minin iyo marti u garaacdo Arsenal tan iyo xilli ciyaareedkii 1946-47, kaddib markii ay 1-0 ku soo garaaceen Gunners kulankii lugta hore ee horyaalka kaasoo ka dhacay garoonka Bramall Lane bishii October.
>- Sheffield United ayaa noqon karta kooxdii ugu horreysay ee u soo dalacda horyaalka, taasoo minin iyo martiba ku garaacda horyaalka Arsenal tan iyo Blackburn Rovers oo iyadoo soo dallacday sidaas oo kale horay u sameysay fasal ciyaareedkii 1992-93.
>- Arsenal ayaa kaliya hal jeer guuleysatay todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka, waxa ay guuleysatay 3 kulan, halka ay barbaro gashay 3 kulan.